Semalt: Kutaura Kwekufambisa Kwemagetsi Kunobatsira Sei Dhavhiro Yako
Chii chinonzi kutengesa motokari? Sei zvakakosha? Zvakanaka, Jack Miller, Mutungamiriri Mukuru weVatengi Vekubudirira Semalt , anotsanangura kuti kutumira motokari ndiyo chikamu chemotokari inowanikwa panzvimbo yako pane imwe nzvimbo. Iko kunogona kuve kubatana kubva kune imwe nzvimbo. Google Analytics pakarepo inoziva kuti webhuta yepamtambo yakanga isati yasvika pawebsite yako. Sezvo zvakadaro (Google Analytics) icharatidza mazita echirongwa chemasayiti aya sekutumira ruzivo rwemigwagwa mumigumo yayo.
Dhiyabhorosi yako inogadziriswa sei paunenge usingaregi kutumira magwara?
Ndizvo zvisiri izvo zvinotarisa zvinongotanga zvidzidzo zvitsva - appraisal blue book car. Zvisinei, kana iwe ukasarudza kurega chero nzvimbo ipi zvayo yekutsvaga, ipapo webhutiro yewebhu kubva kune zvisiri pamutemo haisi kutanga zvitsva zvitsva. Sezvo zviri pachena, kana iwe uchida kutumira nzvimbo kunotanga zvidzidzo zvitsva saka haufaniri kuisa mazita munzvimbo iyi yekuregererwa.
Kubva pane zvataurwa pamusoro apa, unogona kuona kuti sezvo kutumira kunotanga zvidzidzo zvitsva, kusabatanidzi kutumira zvinoreva kuti zvinokanganisa maitiro ako akaverengwa. Izvi zvinogona kuverengwa senhengo imwechete kana dzakawanda zvichienderana nemabatiro ako ekutumira. Nenzira, munhu anoshandisa mysite.com anoshanyira webhusaiti yako; yakoite.com ipapo inodzokera ku mysite.com. Kana usina kutora webhusaiti yako (yakoite.com), ipapo mapurogiramu ose maviri anoverengwa. Kamwe kamwe nguva apo iye / iye anoenda pa mysite.com. Kana kune rumwe rutivi, iwe wakabvisa yakoiteite.com ipapo chete chikamu chimwe chete chaizotanga. Ndiko kusanganisa kushandiswa kwemigwagwa kunokanganisa maitiro ako maitirwo akaverengwa..
Kukurukurirana kwekutsvaga kusarudzwa
yechitatu yekubhadhara kushandiswa
Unofanirwa kuziva nezvekuti webhuti yekutengesa kubva kune imwe nzvimbo uye zvidzidzo zvayo inogona kubviswa. Traffic kubva kunzvimbo yakagadzirwa ne-sub-string mitambo haisi.
Semuenzaniso, kana iwe ukasabvisa ruvara rwekutengesa kubva website.com, ipapo webhusaiti kubva kune domain domain.com and sub domaine another.website.com isabviswa. Webhusaiti kubva kune imwe-website.com hazvina kubviswa.
Nzira yekugadzira sei kutumira kunyoresa mazita?
kutanga nokupinda muakaunti yako yeGoogle Analytics
tsvaga pa 'Admin'
uchishandisa demo rezasi pane imwe nzvimbo pane yako kondori, sarudza pfuma yaunoda kuigadzira
kuwedzera mazita ezita renzvimbo ipapo edza yako sarudzo
chengetedza kuchinja, uye iwe wakanaka kuenda
Nzira yekubvisa sei domain kubva pakusarudzwa kwezita?
Kana pane chimwe chikonzero chinonyanya kuzivikanwa kwauri kuti udzokerezve kubvisa chivako kubva pakurongwa kwekuregererwa iwe unogona kuzviita nyore nyore. Shandisa matanho ari kumusoro kunze kwemashoko maduku-pane kuwedzera kutumira, kubvisa. Gumisa kunze nekudhonza Dhinda Domain uye chengetedza kuchinja.
Iva nechokwadi chokuti runyararo rwako rwekuregererwa runoshanda nekuriongorora. Nyanzvi dzinokukurudzira kuti ushandise kukopa kweGoogle's Tag Assistant. Ichakuudza izvo zviri kuiswa kunze uye izvo zvisingaiti.
Pane nguva apo kushambadzirwa kwemigwagwa kuchiri kuwanikwa mumugumo wako. Zvinogona kuitika nokuti:
vashandisi vakashanyira nzvimbo yako yekutangira usati wanyora urongwa hwekuregererwa
vangave vari kushandisa mabhukukiti